Imithambo emi-6 yokuzivocavoca ngokuchasene neNosteo ye-Neck Osteoarthritis (Osteoarthritis yeNtambo)
Imithambo emi-6 yokuzilolonga ngokuchasene neNosteoarthritis yeNtloko
16 / 03 / 2019 /0 Amazwana/i I-Osteoarthritis (Osteoarthritis), Ukuzivocavoca kunye nokuzivocavoca/av ubuhlungu
I-Osteoarthritis yentamo inokubangela iintlungu zentamo kunye nokungahambi kakuhle.
Nazi iindlela zokuzilolonga ezithandathu (kubandakanya iVIDO) kwabo bane-osteoarthritis yentamo enokubuyisela iintlungu kwaye ibonelele ngokuhamba okungcono. Zive ukhululekile ukuba wabelane ngeli nqaku nomntu obekhathazekile yintlungu yentamo.
I-Osteoarthritis entanyeni ingabandakanya ukuthotywa kwe-cartilage, ukubala, iidiphozithi zamathambo kunye nokunxiba ngokudibeneyo- oku kungakhokelela kwizimo zesithuba esiqinileyo ngaphakathi kwentamo kunye neempendulo zokudumba okubonakalayo. I-Osteoarthritis yentamo inokonyusa imeko yokuqaqanjelwa yintloko kunye nesiyezi.
Silwela wonke umntu onesifo esinganyangekiyo sonyango kunye ne-rheumatism ukuba abe namathuba angcono onyango kunye nophando - into ayivunyelwanga ngumntu wonke, ngelishwa. Njengathi kwiphepha lethu le-FB og ijelo lethu le-YouTube kwimidiya yoluntu ukuba usijoyine kumlo wokuphucula ubomi bemihla ngemihla kumawakawaka abantu.
(Cofa apha ukuba ufuna ukwabelana ngenqaku ngakumbi)
Apha siza kukubonisa izinto ezintandathu zokuzivocavoca ngokunyanga isifo samathambo - onokuyenza yonke imihla.
Ukuqhubeka ezantsi kwinqaku, unokufunda izimvo ezivela kwabanye abafundi- kunye nokubukela ividiyo yoqeqesho olukhulu kunye nokuzivocavoca kwentamo. Apho uyakufumana amanyathelo acetyiswayo anokulungela isifo samathambo.
I-VIDEO: Ukuzivocavoca oku-6 ngokuchasene neNoosteoarthritis engabalulekanga
Apha, i-chiropractor uAlexander Andorff ndikubonisa izinto ezintandathu esihamba ngazo kweli nqaku. Apha ngezantsi unokubona inkcazo eneenkcukacha zokuba imithambo kufuneka yenziwe njani kumanqaku 1 ukuya ku-6. Cofa apha ngezantsi ukubukela ividiyo.
Zive ukhululekile ukubhalisa Kwitshaneli yethu - kwaye silandele iphepha lethu kwi-FB yemihla ngemihla, iingcebiso zezempilo zasimahla kunye neenkqubo zokuzivocavoca ezinokukunceda ngakumbi kwimpilo engcono.
1. Ukuma ngokuKhwela nge-Elastic
Uqeqesho nge-elastic yeyona ndlela ilungileyo yokomeleza umva wangaphezulu naphakathi kwamagxa - oko kukuthi, iqonga lentamo yakho uqobo. Ukuphuculwa komsebenzi kunye nokuhamba ngeli lungelo kuya kuthetha ukuma okuqinisekileyo nokuhamba kwentamo yakho.
Kuyinyani ukuba ukuba unamathele phakathi kwamagxa, oku kuya kuhamba ngaphaya komda wentamo yakho kunye nokuhamba okunxulumene nako. Lo msebenzi unokukunceda ukuba ube nokuma okungcono emqaleni.
Yima nkqo unyukele ezantsi.
Qhoboshela i-elastic kwisibambo somnyango okanye izinto ezinjalo.
Tsala i-elastic ngakuwe ngeengalo zombini - ukuze amagxa egxalaba atsalwe kunye.
Buyela kwindawo yokuqala.
Phinda umthambo izihlandlo ezili-10 ngaphezulu kweeseti ezi-3.
2. Ukujikeleza kwamagxa
Abantu abaninzi abaqapheli ukuba zingaphi iingxaki zentamo eza phakathi kwamagxa. Ukuhamba ngokudibeneyo kokuhamba kunye nezihlunu ezixineneyo kule ndawo zinokuhamba nzima ngaphaya komsebenzi wentamo-kwaye ngakumbi ukuba une-osteoarthritis. Oku kunokunceda ukunciphisa uxinzelelo lwemisipha entanyeni.
Cothisa amagxalaba kancinci ubuye umva de ime ngokwawo-bamba indawo engaphandle imizuzwana emi-3-5.
Yenza intshukumo ngokunyakaza okuthe cwaka.
Phinda usebenzise amaxesha ali-10 ngaphezulu kweeseti ezi-3.
Abantu abaninzi bathwaxwa ziintlungu ezingapheliyo ezichitha ubomi bemihla ngemihla Kungenxa yoko le nto sikhuthaza ukuba Yabelana ngeli nqaku kwimidiya yoluntu, Zive ukhululekile ukuthanda iphepha lethu le-Facebook kwaye uthi, "Ewe kuphando olunzulu malunga nokuxilonga kubuhlungu beentlungu". Ngale ndlela, unokwenza iimpawu zolu xilongo zibonakale ngakumbi kwaye uqiniseke ukuba abantu abaninzi bathathelwa ingqalelo kakhulu kwaye bafumane uncedo abaludingayo.
Siyathemba ukuba ukwanda kwengqwalaselo kungakhokelela kwinkxaso mali enkulu kuphando malunga novavanyo olutsha kunye neendlela zonyango.
Funda: -Iimpawu zokuqala ezili-15 zeRheumatism
Ngaba uchaphazelekile yirheumatism?
3. Ukuphakamisa iinyawo
Lo msebenzi unceda ukugcina ukujikeleza kwegazi kuye kwezinye izihlunu ezikhulu kakhulu zentamo umthambo oqhelekileyo uya kuba nakho ukukunceda ukhulule izihlunu zentamo ezixineneyo kwaye ugcine ukujikeleza kwegazi ekuhlaleni kumalungu adibeneyo.
Njengoko benditshilo, ababaninzi abantu bayazi ukuba uninzi lweemisipha zentamo zincamathisela kumagxa okanye kumqolo ongasemva. Esi sesona sizathu sokuba kubaluleke kakhulu ukugcina ezi zihamba xa ufuna ukusebenza ngokuchasana nentlungu encinci yobomi bemihla ngemihla.
Ukuhamba rhoqo kunye nokusetyenziswa ngokufanelekileyo kuya kunciphisa amathuba okuqhubeka kokuphuhliswa kwe-osteoarthritis. Kukutya okujikeleza igazi okusebenza njengezinto zokwakha zokulungisa amalungu adakileyo kunye nezihlunu zemisipha.
Yima nkqo kwaye ubambe iingalo zakho ecaleni lakho.
Phakamisa igxalaba elinye ngokuzinza kunye nokulawula ukuhamba.
Phinda umthambo izihlandlo ezili-10 kwicala ngalinye ngaphezulu kweeseti ezi-3.
Ngaba uyazi ukuba abantu abaninzi abanesifo samathambo baxela ukuphuculwa komzimba ngokuzivocavoca rhoqo echibini lamanzi ashushu? Ngokuzivocavoca emanzini, kukho iindlela ezithile ezilula zokuzilolonga ezilula ukuzenzela abo banesifo esibalulekileyo samathambo kunye nethambo lomqala. Amanzi ashushu ayanceda ukugcina igazi lihamba kwaye kunciphisa uxinzelelo lwentamo yemisipha.
Funda: -Unceda njani ukuZilolonga kwiPhuli yaManzi ashushu kwiFibromyalgia
4. Intambo eguqukayo (yolukhuni lweNgemuva langemva)
Ngokubulawa rhoqo, wolula kunganceda ukugcina izihlunu ezikwintamo ngakumbi kwaye zishukumise. Kodwa ubusazi ukuba baninzi abazolula kakhulu? Iseti yokuqala yolule kufuneka ihlale izolile kakhulu- ukuze izihlunu ziqonde ukuba "ngoku izolulwa".
Abantu abaninzi abane-osteoarthritis yentamo babethwa ngentamo ebalulekileyo kunye nezihlunu zomqala eziqinileyo. Lo msebenzi wokunxiba unokunceda ukunciphisa ezinye zezizifo.
Nxibelelana nentloko ngezandla zozibini. Emva koko hambisa intloko yakho ngokuthe chu.
Kuya kufuneka uzive ukuba wolule kakuhle ngasemva wentamo.
Bamba umkhombandlela imizuzwana engama-30 ngaphezulu kweeseti ezi-3.
Funda: Ingxelo yoPhando: Esi sesona sidlo sihle seFibromyalgia
Cofa kumfanekiso okanye kwikhonkco elapha ngasentla ukuze ufunde ngakumbi malunga nokutya okufanelekileyo okulungiselelwe abo bane-fibro.
5. Ukolula icala (icala icala lentambo)
Ukhe waqaphela ukuba ithambo lomqala lakhokelela kukungahambi kakuhle kwentamo? Lo msebenzi wolula ujolise kwimisipha esiyifumana kwicala lentamo-kubandakanya i-levator scapulae kunye ne-trapezius ephezulu.
Umthambo unokwenziwa ukuhlala okanye ukuma.
Bamba intloko yakho ngesandla esinye.
Dlulisa intloko yakho ecaleni.
Kuya kufuneka uzive ukuba wolule ngobumnene kwelinye icala lentamo.
Umthambo wenziwa imizuzwana engama-30 ngaphezulu kweeseti ezi-3.
Kwinqaku elingezantsi, uya kubona iindlela ezintlanu ezilungisiweyo zokuzilolonga ezinokukusebenzela kunye ne-osteoarthritis yomqala. Ngokufanelekileyo, ukuziqhelanisa nokuzivocavoca okwenziwe ngendlela efanelekileyo yindlela efanelekileyo yokugcina ukuhamba kwegazi lakho kunye nokutshintshiselana okuhlanganisiweyo kokudibeneyo ngaphakathi kwamalungu akho.
Funda: 5 Ukuzivocavoca umzimba kwabo baneFibromyalgia
Cofa apha ngasentla ukuze ubone le misebenzi yoqeqesho.
6. Iileyibheli zolulwa ngephathi yomtshayelo okanye umhluzi
Lo msebenzi unceda ukubuyisela ukunyakaza kunye nokushukumiseka kwamagxa kunye namagxa. Ngokusebenzisa umngxunya okanye ngokufanayo, uya kukwazi ukushukuma ngokuthe ngcembe izandla zakho kunye nokuziva ukuba ukhula kakuhle endaweni yentamo kunye namagxa.
Yima nkqo phezulu nasezantsi- ngentonga yomtshayelo okanye efanayo.
Hambisa ishafti ngasemva kwaye ube nesandla esinye phezulu eshafini - esinye ezantsi ezantsi.
Hambisa izandla zakho ngokusondeleyo kude kube yilapho uziva wolule kakuhle.
Umthambo wenziwa ngawo omabini iingalo zaphindaphindeka ezili-10 zohambo.
Abantu abaninzi abane-osteoarthritis yentamo banokunxiba ngokudibeneyo kwamanye amalungu omzimba- njengamadolo. Ngaba uyazi ukuba i-osteoarthritis yahlulwe yangamanqanaba amahlanu ahlukeneyo-ngokusekwe kwindlela elinxibe ngayo ngokudibeneyo? Kwinqaku elingezantsi ungafunda ngakumbi ngezigaba ezahlukeneyo zesahlo samadolo kunye nokuba imeko ikhula njani.
Funda: -Izigaba ezi-5 zeKnee Osteoarthritis
Kunconywe ukuziNceda ngokwakho kwiRheumatic and Chronic Pain
ucinezelo Noise (ezinje ngeekawusi zoxinzelelo ezifaka isandla ekwandeni kokujikeleza kwegazi kwimisipha ebuhlungu okanye iiglavu zoxinzelelo ezitshintshiweyo og iikawusi ngokuchasene neempawu ze-rheumatic ezandleni nasezinyaweni)
Cofa kumfanekiso ukuze ufunde ngakumbi malunga neiglavu zoxinzelelo.
Abahambisa iinzwane (Iindidi ezininzi ze-rheumatism zinokubangela iinzwane ezibotshiweyo-umzekelo iinzwane zesando okanye i-hallux valgus (iinzwane ezinkulu ezigobileyo)
Iteyiphu ezincinane (uninzi lune-rheumatic kunye neentlungu ezingapheliyo zivakalelwa kukuba kulula ukuziqeqesha ngeelastics zesiko)
Kcukumisa Balls indawo (ukunceda ngokwakho ukusebenza kwezihlunu mihla le)
IArnica cream okanye isixhobo sokufudumeza ubushushu (Abantu abaninzi baxela ezinye iintlungu xa besebenzisa, umzekelo, iarnica cream okanye isixhobo sokufudumeza ubushushu)
-Abantu abaninzi basebenzisa i-arnica cream ngenxa yeentlungu ngenxa yokuqina kwamalungu kunye nezihlunu ezibuhlungu. Cofa kumfanekiso ongentla ukuze ufunde ngakumbi ngendlela mzantsiweb inokukunceda ukukhulula ezinye zeemeko zakho zentlungu.
Ulwazi oluninzi? Joyina eli qela!
Joyina iqela le-Facebook «I-Rheumatism kunye neNhlungu eziNgapheliyo - INorway: Uphando kunye neendaba»(Cofa apha) uhlaziyo lwamva nje olwenziwe kuphando kunye nokubhala kumajelo osasazo malunga noxinzelelo kunye nochatha. Apha, amalungu anokufumana uncedo kunye nenkxaso-ngalo lonke ixesha lemini- ngokutshintshana ngamava abo neengcebiso.
IVIDIYO: Ukuzivocavoca iRheumatists kunye nabo bachaphazelekayo yiFibromyalgia
Joyina usapho, zive ukhululekile ukubhalisa Kwitshaneli yethu (Cofa apha) - kwaye ulandele iphepha lethu kwi-FB kwiingcebiso zempilo yemihla ngemihla kunye neenkqubo zokuzilolonga.
Sinethemba lokuba eli nqaku linokukunceda ekulweni iingxaki zamathambo kunye nentlungu engapheliyo.
Zive ukhululekile ukuba ube nenxaxheba kwiMedia yeNtlalontle ukuze wonyuswe ukuqonda malunga nobuhlungu obungapheliyo
Kwakhona, sifuna ukwenza njalo buza kakuhle ukuba wabelane ngeli nqaku kwimidiya yoluntu okanye ngebhlog yakho (nceda udibanise ngokuthe ngqo kwinqaku). Ukuqonda, ulwazi ngokubanzi kunye nokugxila okwandileyo ngamanyathelo okuqala obomi obungcono bemihla ngemihla kwabo baneentlungu ezinganyangekiyo.
Iingcebiso malunga nendlela onokuyinceda ngayo ukulwa nentlungu engapheliyo
Ukhetho A: Yabelana ngokuthe ngqo kwi-FB -Khuphela idilesi yewebhusayithi kwaye uyincamathisele kwiphepha lakho le-facebook okanye kwiqela elifanelekileyo le-facebook olilungu lalo. Okanye ucinezele iqhosha "SHARE" apha ngezantsi ukuze wabelane ngokubhaliweyo kwi-facebook yakho.
Cofa eli qhosha ukuze wabelane ngakumbi. Enkosi kakhulu kuye wonke umntu oncedayo ekukhuthazeni ukuqonda okungaphaya kokuqonda isifo!
Ukhetho B: Nxibelelanisa ngokuthe ngqo nenqaku kwibhlog yakho.
Ukhetho C: Landela kwaye ulingane Iphepha lethu le-Facebook (Cofa apha ukuba uyafuna) kunye Ijelo lethu le-YouTube (Cofa apha ukuze ufumane iividiyo ezisimahla!)
kwaye ukhumbule ukushiya inqanaba leenkwenkwezi ukuba ulithandile inqaku:
IPHEPHA ELANDELAYO: - Oku kufuneka uyazi malunga ne-Osteoarthritis ezandleni zakho
Cofa kumfanekiso apha ngasentla ukuya kwiphepha elilandelayo.
Ukucetyiswa kokuzinceda ngokwakho ukuze afumane esi sifo
ucinezelo Noise (Umzekelo, iisokisi zoxinzelelo ezinegalelo ekwandisweni kwegazi ukuya kwimisipha ebukhali)
(Kwitshaneli yethu ye-YouTube uya kufumana indawo yokugcina ngoovimba iividiyo ezisebenzayo kunye neenkqubo zokuzivocavoca ezinokukunceda ubuye kwimini engenazintlungu. Zive ukhululekile ukubhalisa kwisiteshi.)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Øvelser-mot-Betydelig-Nakkeartrose.jpg?media=1648573622 368 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2019-03-16 19:12:352021-03-24 10:59:03Imithambo emi-6 yokuzilolonga ngokuchasene neNosteoarthritis yeNtloko
Unyango olu-7 lweNdalo kunyango lweArmoriasis Iimpawu ezi-9 zokuqala zeSifo seNyango esiNganyangekiyo